Horumarinta Wax soo saarka - Chapman Technology Co., Ltd.
At Abuuraha Chapman, Waxaan fahamsanahay tartanka wehelkayaga ganacsiga wejigiisa warshado badan. Wada-hawlgalayaashayada ganacsiga waxay ku xisaabtameen kooxdeena injineernimada khibradda leh ku dhowaad shan sano si ay u taageeraan faa'iidooyinkooda tartan.
Waxaan diirada saareynaa isgaarsiinta joogtada ah inta lagu gudajiro howlaha oo dhan, oo ay kujirto wajiga naqshadeynta, si loo xaqiijiyo guusha dalabkeena lamaanahaaga ganacsiga Maareeye Barnaamij u heellan ayaa loo xilsaaray mashruuc kasta. Iyadoo loo marayo fikradaha wada-hawlgalayaasha, kooxdayada farsamada waxay ku siin karaan naqshadeynta iyo horumarinta dhammaan qaab-dhismeedka wax soo saarka iyo barnaamijka dalabka. Tani waxay hubineysaa la-hawlgalayaashayada heerka ugu sarreeya ee tayada, waxtarka iyo waxtarka kharashka ee qayb kasta oo la soo saaray.
Kooxdayadu waxay aamminsan yihiin dhammaan heerarka horumarinta iyo soo saarista dalabku inay muhiim yihiin. Waxaan si dhow ula shaqeynaa wada-hawlgalayaashayada ganacsiga si loo xaqiijiyo guusha dhammaan marxalad kasta. Feejignaantayada ku aaddan horumarinta wax soo saarka, naqshadeynta wax soo saarka iyo ka faa'iideysiga socodka caaryada si loo lafaguro loona sameeyo talooyinka naqshadeynta waxay siisaa la-hawlgalayaashayada ganacsiga gees gees tartan bilowgii.
Marxalad kasta oo aad ku jirtid inta lagu guda jiro horumarinta wax soosaarka kooxdeena waxay diyaar u yihiin inay ku caawiyaan oo ay talo ka bixiyaan naqshadahaaga si loo yareeyo kabadhada iyo kharashaadka adeegga sare.
Waxaan la shaqeynay macaamiisha si aan u horumarinno alaabada qaar ka mid ah meelaha soo socda:
1. Ciyaaraha iyo Bannaanka
2. Dhaqdhaqaaqa / Helitaanka
3. Caafimaadka / Fayo-qabka
4. Qalabka Warshadaha
5. Mashiinnada Warshadaha
Tallaabada koowaad ： Fikrad - Mashruucu wuxuu ku bilaabmayaa fikirkaaga wax soo saar. Aynu kaa caawinno inaad qeexdo shaqadeeda lagama maarmaanka ah oo aad aragto qaab u shaqeyn doona sida ugu fiican suuqaaga bartilmaameedka. Waxaan sidoo kale qiimeyn doonnaa oo aan tixgelin doonnaa baaritaanka hantida aqooneed ee jirta.
Tallaabada labaad ： Baadhitaan Faahfaahsan- Intii aan go'aansanay Aqoonsiga wax soo saar cusub, kooxdeena suuq-geynta ganacsiga waxay u baahan tahay inay sameyso cilmi baaris suuqa ah si loo hubiyo in badeecadeennu ay la kulanto heerka suuqa ee hadda jira iyo baahida suuqa. Marka la eego natiijooyinka falanqayntayada suuqa, waxaannu kor u qaadi doonnaa oo kor u qaadi doonnaa qaab-dhismeedka wax soo saarka, shaqooyinka, waxaanna u oggolaan doonnaa in badeecadeennu ay si dhakhso ah suuqa ugu soo galaan iib ahaan.
Tallaabada saddexaad ：Naqshadeyn - Si loo sameeyo badeecada ugu fiican ee meheraddaada ganacsi, waxaan u baahan doonnaa inaan u adeegsanno qaab-u-qaabeynta wax-soo-saarka (DFM) habka wax soo saarku u noqon karo mid wax ku ool ah intii suurtagal ah. Fikradaha waxay qaabeeyaan barnaamijyadeena qaabeynta 3D, waxaanana go'aan ka gaari karnaa astaamaha, nooca foomka, iyo qalabka. Waxaan ku heshiin doonaa wadada ugu macquulsan ee horay loogu sii wado badeecadaada ka hor inta aan loo gudbin marxaladda dhismaha.
Tallaabada afaraad ：Nooca - Xarunteena sida buuxda u qalabeysan, waan goyn karnaa, jarjari karnaa, ka been abuuri karnaa, daabacaadda 3D, silig, iyo barnaamij kasta iyo qayb kasta ka hor intaanad soo ururin noocaaga. Marxaladda horudhaca ahi way soo noqon kartaa iyadoo naqshadaha kala duwan la tixgelinayo lana tijaabinayo.
Tallaabada shanaad ：Soo-saarista - Khabiiro ahaan wax soo saarka, otomatiga, iyo geeddi-socodka warshadaha, waxaan kaa caawinaynaa inaad qaabeeysid badeecadaada adigoo maanka ku haya inaad ka faa'iideysato fursadaha keydinta ee wadada. Awooddeena gudaha waxay noo oggolaaneysaa inaan dhammaystirno xoogaa wax soo saar ah.
Tallaabada lixaad ：Gaarsiinta - Jiilka koowaad ee badeecadaada ayaa diyaar u ah wax soo saar iyo suuq. Waxaad heli doontaa xirmo naqshadaysan oo dhammaystiran, noocyo nooc ah, iyo suurtagal yar oo keyd ah. Waxaad sidoo kale heli doontaa taageerkeena markaad u gudbeyso talaabooyinka xiga.
Waa muhiim in la qiimeeyo kiiska ganacsiga iyo "qiimaha ganacsiga" marka la soo saarayo wax soo saar. Kooxdayadu waxay si kalsooni leh kaaga caawin doonaan inaad si dhakhso leh u qiimeyso suurtagalnimada waxayna kugu hagi doontaa adiga oo falanqeynaya dhibaatada dhibaatadaadu higsaneyso inay xalliso.